2 Ná Naomi kunu wɔ obusuani+ ɔdefo+ bi a ne din de Boas;+ ná ofi Elimelek abusua mu. 2 Bere bi akyi no, Moabni Rut ka kyerɛɛ Naomi sɛ: “Ma menkɔ obiara a menya n’anim dom afuw mu nkodi n’akyi nsesaw+ nnɔbae a wɔatwa awie no ase.” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, kɔ.” 3 Ɛnna ɔkɔ kodii wɔn a wɔretwa nnɔbae no akyi kɔsesaw ase.+ Baabi a okopuei no, na ɛhɔ yɛ Elimelek+ busuani Boas+ afuw mu. 4 Na hwɛ, Boas fi Betlehem bae, na sɛ ɔka kyerɛ adwumayɛfo no sɛ: “Yehowa nka mo ho”+ a, na wɔn nso agye so sɛ: “Yehowa nhyira wo.”+ 5 Ɛnna Boas+ bisaa aberante a ɔhwɛ adwumayɛfo no so no sɛ: “Saa ababaa yi fi he?” 6 Aberante a ɔhwɛ adwumayɛfo no so no buae sɛ: “Ababaa no yɛ Moabni+ a ɔne Naomi fi Moab asase so bae no.+ 7 Ɔbɛkae sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma minni adwumayɛfo no akyi na mensesaw+ nnɔbae no ase.’ Enti ɔbae, na wagyina ne nan so fi anɔpa de abesi sesɛɛ, na afei na watena ase kakra.”+ 8 Akyiri yi, Boas ka kyerɛɛ Rut sɛ: “Me ba, tie nea mereka yi. Mfi ha nkɔ baabiara,+ nkɔ afuw foforo biara mu nkɔsesaw nnɔbae ase; di me mmaawa yi akyi.+ 9 Hwɛ di wɔn akyi fa afuw no fã a wɔretwa no. Maka akyerɛ mmerante no sɛ wɔmmfa wɔn nsa nnka+ wo. Sɛ osukɔm de wo a, nom nsu a mmerante no bɛkɔ akɔsaw no bi.”+ 10 Ɛnna ɔde n’anim butuw fam+ kae sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na ɔhɔho te sɛ me,+ me ho asɛm ahia wo na manya w’anim dom yi?” 11 Na Boas nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea wo kunu wu akyi woyɛ maa w’ase no,+ mate+ ne nyinaa, sɛnea woagyaw wo papa ne wo maame ne w’abusuafo hɔ abɛtena asase yi so, baabi a wunnim hɔ da.+ 12 Yehowa nhyira wo nea woyɛ biara mu,+ na Yehowa, Israel Nyankopɔn a woabɛhyɛ ne ntaban ase+ no mma wo akatua pa.”+ 13 Na ɔkae sɛ: “Me wura, ma minnya w’anim dom daa. Woakyekye me werɛ, na woaka asomdwoe nsɛm akyerɛ w’abaawa,+ nso menyɛ wo mmaawa no mu bi mpo.”+ 14 Eduu adidibere no, Boas ka kyerɛɛ no sɛ: “Twiw bɛn ha bedidi+ na fa wo paanoo bɔ bobe nsu no mu bi.” Enti ɔkɔtenaa adwumayɛfo no nkyɛn. Na ɔmaa no nkyewe,+ na ɔwe mee ma ebi kae. 15 Afei ɔsɔree sɛ ɔrekɔsesaw+ nnɔbae no ase. Ɛnna Boas ka kyerɛɛ ne mmerante no sɛ: “Momma ɔnsesaw bi na mma obiara nnteetee+ no. 16 Munyiyi nnɔbae no nso bi ngu fam mma ɔnsesaw,+ na monnteɛteɛ no.” 17 Na ɔsesaw nnɔbae wɔ afuw no mu kosii anwummere;+ ɔboroo+ nea wasesaw no, na onyaa atoko bɛyɛ efa+ biako. 18 Ɛnna ɔfa kɔɔ fie, na n’ase huu nnɔbae a onyae no. Na ɔde aduan a odii wɔ afuw mu ma ɛkae no+ maa no. 19 Ɛnna n’ase bisaa no sɛ: “Ɛhe na wokɔsesaw nnɔbae nnɛ, na ɛhe na wokɔyɛɛ adwuma? Nhyira nka onipa a ɔdom wo no.”+ Ɔkyerɛɛ n’ase no faako a ɔkɔsesaw nnɔbae no, na ɔkae sɛ: “Ɔbarima a mekɔɔ n’afuw mu nnɛ no din de Boas.” 20 Na Naomi ka kyerɛɛ ne sew no sɛ: “Yehowa a ɔda adɔe+ adi kyerɛ ateasefo ne awufo+ no nhyira no.”+ Na Naomi ka toaa so sɛ: “Ɔbarima no yɛ yɛn ho nipa.+ Ɔyɛ obusuani a obetumi agye yɛn.”+ 21 Na Moabni Rut kae sɛ: “Ɔsan ka kyerɛɛ me sɛ ‘Di m’adwumayɛfo no akyi kosi sɛ wobetwa me nnɔbae no nyinaa awie.’”+ 22 Ɛnna Naomi+ ka kyerɛɛ ne sew+ Rut sɛ: “Me ba, eye sɛ wo ne ne mmabaa no bɛyɛ adwuma na obi ankɔhaw wo wɔ afuw foforo bi mu.”+ 23 Enti odii Boas mmabaa no akyi sesaw nnɔbae ase kosii sɛ wotwaa atoko+ ne awi no wiei. Na ɔkɔɔ so ne n’ase no tenae.+